Imibongo emifutshane yothando Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Imibongo kunye neendinyana zisenokungabi yimfashini ngeli xesha, nangona kunjalo, into engenakuphikwa kukuba amashumi eminyaka, kwaneenkulungwane, bezizezona ndlela zibalaseleyo zokoyisa abantu basetyhini, kwaye uthandana nothando lobomi bakho.
Ke mhlawumbi lixesha lokuba ubuyise iivesi zothando ezimfutshane kwifashoni yokwenza ukuba intombazana iwele eluthandweni.
Nangona kunjalo, siyazi ukuba ukwenza umbongo ukusuka ekuqaleni kunzima kwaye kungadla umsebenzi omninzi kunye nomzamo, kanye ngenxa yeso sizathu besifuna ukukunika uncedo lwethu, sikubonise iivesi ezilungileyo ezikwenza ukuba uthandane, ukuze, ngaloo ndlela, kufuneka baxelele kwisithandwa sakho.
1 Imibongo yothando olufutshane
2 Iivesi ezimfutshane zothando
3 Iividiyo zemibongo emifutshane yothando
Ndifuna uyazi ukuba ulilizwe lam, ubomi bam bonke, sithandwa sam, ngaphandle kwamathandabuzo yintoni endenza ngcono. Ubuhle bakho buyandizalisa ngovuyo, bundizalisa ngothando, kwaye into endiyifunayo kukuba ube nentliziyo yam ngonaphakade.
Ukuba ukhe wandithanda, nceda ubuyele kum, kuba ngaphandle kokuba ube nawe apha, ndiziva ngathi ubomi bam buphelile.
Uthando lwakho lubuhlungu kakhulu, andinakukuthwala, kwaye kukuba uthando olukhulu kangaka kunzima ukuluthwala.
Buhle, ndifuna ukwaphula umkhenkce walo mzuzu mhlawumbi ndicingele ubuso bakho ngezi zandla, ndize ndigubungele loo mehlo aluhlaza, ndibengubani kwaye ndikuthande, ndinyibilike kumadangatye esiwakhanyisayo xa sincamisana.
Ukujonga kwakho kokwengelosi, yengelosi egcinayo, ingelosi endithandayo, kwaye ihlala ihamba nam. Ukuba ungahamba ngenye imini, andizukuphinda ndiyazi ukuba mandithini, ngoba ukuhlala ngaphandle kwakho sithandwa sam kubangela iintlungu.
Uthando, ndingathanda ukungena kuwe ukuze uhlale, mhlawumbi uqashele ubuso bakho ngale milomo kwaye umamele ilizwi lakho lokuthakatha, ukuba ndingubani, unditshisa ndinyibilika kumadangatye esiwakhanyisayo xa sincamisana ...
Uthando endikuva ngawe alunakulinganiswa, ngethamsanqa uyandithanda, kwaye ndiya kusoloko ndiyintanda yakho.
Mingaphi iminyaka ekuzakufuneka ndilinde, ukuze ekugqibeleni ndibe secaleni kwakho, mingaphi iminyaka ekufuneka ndiyilindile, ngaphandle kokuyeka ukukuthanda. Ndiyathemba ukuba isiphelo ekugqibeleni siza kundinceda, kwaye ixesha elincinci nelincinci lihleli, kuba ngaphandle kothando lobomi bam obujikelezileyo, lindilinde nje ukufa.
Yho hayi uthando luza ngam, andazi ukuba mandithini, kuzakufuneka ndizimele okanye ndibaleke. Hayi, uthando luyasondela lusondela, kuyakufuneka ndilushiye ucango lwam luvulekile.
Isigqumathelo esihle sitshintshile, kodwa njengesiqhelo kuphela kwaso.
Intloko nentliziyo zijongane, ngenxa yokuba nobuganga bokuba nawe. Intliziyo yam ithi qhubeka, isizathu sam sithi, lumka.
U-Cupid ngokungathandabuzekiyo weza kundibona, kwaye entliziyweni utolo lubethile, kuba ngoku ngalo lonke ixesha usondela, ndinokucinga ngemilebe yakho kuphela.
Ethandweni akukho mithetho, azikho iindlela ezinokukunceda. Ethandweni akukho nto, eluthandweni kukho uthando kuphela. Kwaye ukuba ucinga ukuba ukuthanda akwanelanga, kwaye ukuba ucinga ukuba ufuna enye into, ndiyaxolisa ukukuxelela umhlobo, ukuba awufanelanga kuthanda.
Andoyiki ikamva uthando lwam, kuba isiphelo sam nguwe kuphela. Andoyiki kwanto, kuba uya kuhlala unam.
Kumthi wobomi, mna nawe kufuneka sibe kunye, kumthi wobomi, akukho wumbi kum.
Ukuba wakhe wandithanda, ndicela ungandixokiseli, ukuba wakhe wandithanda, sukuyophula intliziyo yam. Ukuba undithandile ngokwenene, ndixelele ngoku, ekugqibeleni ndivume, ukuba ndikhona ngawe.
Uthando yinto enzima ukuyichaza, awusoze wazi ukuba uyaziva nyani, yiyo loo nto sithandwa sam, ndifuna ukuvuma kuwe, ukuba bendihlala ndikuthanda, andizukuyeka ukukuthanda.
Iivesi ezimfutshane zothando
Indlela ebuyayo ihanjwa ithe cwaka kwaye ineliso kwimemori ekwabelwana ngayo. Kwaye andazi ukuba kuyakuba kukuzola okukhanyayo okanye ixesha kodwa mzuzwana ngamnye ndifuna ukuchitha nawe.
Indlela ebuyayo ihanjwa ithe cwaka kwaye ineliso kwimemori ekwabelwana ngayo. Kwaye mhlawumbi iya kuba luvelwano lwakho okanye ixesha kodwa mzuzwana ngamnye ndifuna ukuchitha nawe.
Ndiyakuthanda sithandwa sam, ndilikhoboka kuwe, kubuhle bakho, kumphefumlo wakho. Ungoyena mhle emhlabeni kum, ufana nesipha seentyatyambo esigcwele imibala. Nguwe kuphela okwaziyo ukundenza ndizive ndikhethekile, kundenza ndizive ndibodwa kwaye ndiyinyani. Ngexesha endinawe, ndinokuxelela ukuba ndiya kuhlala ndikuthanda.
Izandi eziphuma emlonyeni wakho zinjengengxangxasi, ziyakhawuleza, zinamandla, kodwa kwangaxeshanye zihambisa ukuzola okukhulu. Andiyeki ukuphupha ngawe, naye, ngolwimi lwakho, nangamazwi akho ...
Iimvakalelo aziyiqondi imibala, aziqondi iincasa. Iimvakalelo aziqondi nantoni na, kuphela kwemiphefumlo emibini ethandanayo. Iimvakalelo zahlukile kwaye zinzima, kodwa zikwimo efanelekileyo kwaye zicacisa.
Kufuneka ubazi ubomi bam, ukuba intliziyo yam yeyakho, ukusukela ngoku ukuya phambili, andizukuyeka ukukuthanda. Ukuba ndikunike intliziyo yam, uya kuba nayo yonke into, ngoku ndilikhoboka lakho, kunye nam ungenza yonke into.
Ungaze ulibale ngam, nokuba ixesha lihamba lidlula, ndiya kuhlala ndilapha. Nokuba umgama ukhona, ungaze ulibale, ndingowakho kuwe, owakho ngonaphakade uya kubona.
Nokuba kwezona ntsuku zibuhlungu, uza kundinceda, ucoca yonke into embi, uyisuse kum. Uncumo lwakho lufana namanzi acocekileyo, andihlambululayo, ufana nomoya ovuthuzayo obamba ulwandle.
I-caress ezandleni zakho, ukwanga okuphuma emlonyeni wakho, ukujonga ngamehlo akho, ngokwenene, kum ayikho enye. Ukuba ngenye imini awundithandi, kwaye ufuna ukubaleka, ndixelele ngamazwi, nokuba uyandibona ndilila.
Uthando phakathi kwethu yinto ekunzima ukuyilibala, ndiyakuthembisa ngentliziyo, ukuba ayisoze iphele. Ukusukela ngoku ukuya phambili, iya kuba ngumnqophiso wam, ukukwenza ukuba undithande de iphele ingoma yethu.
Iividiyo zemibongo emifutshane yothando